Ukuphazamiseka kwimbonakalo kunye nokukhubazeka kokufunda | Oomama Namhlanje
Ukuphazamiseka kwimbonakalo kunye nokukhubazeka ekufundeni
UAlicia tomero | 13/06/2021 10:00 | Iingcebiso, Intsapho, ZeMpilo
Uninzi lweengxaki zokufunda ezinokubakho kubantwana abahamba isikolo banokuba njalo izizathu zeengxaki ezibonakalayo okanye ukuphazamiseka. NgokweAmerican Academy yeOphthalmology, omnye kubantwana abane unesiphene.
Iziphumo zixhaphakileyo zibandakanya ukusuka kwi-myopia, i-astigmatism, i-hyperopia, nangona kukho abantwana ababonisa ingxaki yokuhambisa ngokubona, phi inokuchazwa njengokukhubazeka. Kule meko, ingqondo ayizisebenzisi kakuhle zonke izinto ezizibonayo nezizivayo.
1 Ukungaboni kakuhle ngenxa yokukhubazeka
2 Ukuphazamiseka okubonakalayo kukhubazeko lokufunda
3 Ingasonjululwa njani le ngxaki?
Ukungaboni kakuhle ngenxa yokukhubazeka
Unobangela ophambili awaziwa apho kunokuvela khona le ngxaki, nangona inokuba yingxaki yelifa, ukuzalwa ngaphambi kwexesha, ukwenzakala entloko, ingxaki yomzimba ngexesha lokuhanjiswa okanye usulelo lwenkqubo ye-nervous system.
Umntwana onolu hlobo lokukhubazeka uya kuba nalo ubunzima bokufunda ukufunda kwaye ngenxa yomzamo omkhulu uya kuphulukana nomdla wokufunda. Uya kuba nengxaki yokwenza imatriki okanye ubunzima ekucwangciseni ulwazi kunye neengcinga.
Ukusombulula le ngxaki, umntwana uya kuhlala ebekwa ezandleni ze ootitshala neengcali ezifanelekileyo ukubonelela ngenkxaso yabo enkulu kunye nokuphucula ukufunda kwabo. Akululanga ukubhenela kwiindlela ezikhawulezayo, kuba ixesha kunye nomonde zezona zinto zidibeneyo ukuze ufumane iziphumo ezilungileyo.
Ukuphazamiseka okubonakalayo kukhubazeko lokufunda
Aba bantwana banokhubazeko ekufundeni ukanti i-IQ yabo iphakathi kweeparameter. Ukunqongophala kwakho kolwazi lweemvakalelo akunxulunyaniswa nokuba ngumntwana owonqenayo ukuba unomdla wokufunda, yiyo loo nto kufuneka ujonge unobangela wokukunyanga.
Olona phazamiso lubonakalayo oluqhelekileyo yinto qaphela ukuba umntwana ubona kufiphele okanye kabini, uhlanganisa iliso elinye ukuze akwazi ukubona elinye, usebenzisa umnwe ukuze akwazi ukufunda ngokuzithemba, asondele ephepheni xa efunda okanye ebhala, edida amagama, efunda kancinci, ebhala ngokungalungelelananga kwaye intloko ebuhlungu xa begqiba usuku lwabo.
Umntwana ogqibela ngokungaboni nto uya kuba nengxaki yokufunda. Olu hlobo lokungaqhelekanga lwenza ukuba ungaluqondi ukuba kutheni ubona ukufiphala okanye unengxaki ye-myopia kwaye uhlala ezabalazela ukufuna ukubona into. Iimpazamo zakhe zichaziwe ngakumbi xa esenza iimpazamo ezininzi ngexesha lokubhala umsebenzi.
Nangona kunjalo, ingxaki ekugxilwe kuyo, ukungaboni kakuhle, ukuhamba kwamehlo ngokukhawuleza okanye amehlo aweleyo awenzi ngabo babangela ubunzima ekufundeni. Ukuba umntwana unazo ezi ngxaki zincinci ntetho inye nokuthintela umntwana ekufundeni ngokuchanekileyo, ngoba umntwana usakrelekrele njengabanye abantwana.
Ingasonjululwa njani le ngxaki?
Ukujongana nengxaki yokubona, into yokuqala ekufuneka yenziwe yiya kugqirha wamehlo othenjiweyo. Apho baya kugqiba ukuba umntwana unalo naluphi na uhlobo lokungaboni kakuhle. Kwiimeko ezininzi iingxaki eziqhelekileyo zivela njenge iliso elonqenayo okanye i-myopia, nangona zikho ezinye izifo ezibonakalayo ezinokufunyanwa.
Olona nyango lusebenzisayo kukusetyenziswa ndinxibe iiglasi Ingcali ingacebisa. Iya kuba lolona nyango lulungileyo ukuze umntwana ochaphazelekayo aqonde ngcono kwaye funda kakuhle.
Kubantwana abaneengxaki ezibonakalayo ezibonakalayo Unyango lombono wokuziphatha luyasetyenziswa. Isetyenziswa njengonyango lomntu ngamnye olwenziwa ziingcali. Kule meko abantwanabafunde ukusebenzisa umbono ngokuchanekileyo ukwenza uqhagamshelo lweeurological oluchanekileyo ukuze ukwazi ukulungisa ezi nguqulelo zibonwayo kwaye kuthintela ukufunda ngokuchanekileyo. Bahlala bedibana kanye ngeveki ngemithambo ecwangciselwe ekhaya.
Ukuqukumbela, kufanele kuqatshelwe kwakhona ukuba ukuphazamiseka kokubonakalayo ngokuqinisekileyo ichaphazela abantwana abaninzi kunye nolutsha kwiminyaka yakhe yokufunda. Nangaluphi na uphawu kunokubonakala kwaye kudala ezi mpawu, esona sisombululo sisiso khawuleza ubone ugqirha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Ukuphazamiseka kwimbonakalo kunye nokukhubazeka ekufundeni
Amawele ngaphambi kwexesha
Izinto ezi-6 ofanele uzifundise umntwana wakho ngaphambi kwexesha lokufikisa